Ilhaan Cumar aabaheed oo u geeriyooday cudurka Covid-19 | Jowhar Somali news Leader
Home News Ilhaan Cumar aabaheed oo u geeriyooday cudurka Covid-19
Ilhaan Cumar aabaheed oo u geeriyooday cudurka Covid-19
Aabaha dhalay Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka, ayaa habeenkii Isniintii u geeriyooday cuduruka COVID-19, sida bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay Ilhaan oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka.
“Waxaan ayada oo aad u murugo iyo xanuun badan macasalaama dhahayaa aabahay,” ayey Ilhaan ku tiri bayaanka ay soo saaratay. “Erayo kuma qeexi karo waxa uu uga dhignaa aniga iyo inta taqaanay ee jecleyd.”
Ilhaan iyo aabaheed Nuur Cumar Maxamed ayaa ayaga oo qaxooti ah yimid Mareykanka 1995-kii, markaasi oo ay kasoo carareen dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya, waxayna ugu dambeyn degeen magaalada Minneapolis.
Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib ayaa November 2018 loo doortay xubno ka tirsan Aqalka Wakiilada, ayaga oo noqday labadii gabdhood ee ugu horreeyey ee muslimiin ah ee ka mid noqda Congress-ka Mareykanka.